DataNumen: Mpivarotra indray
Mitadiava mpivarotra eo akaikinao:
Mifandraisa amin'ireo orinasa eo an-toerana izay manolotra sy manohana DataNumen vokatra. Serivisy fanofanana matihanina sy fampidirana a DataNumen ny mpivarotra dia hanampy anao hahatratra ny tambiny avo indrindra amin'ny fampiasam-bolanao:
Adiresy: foibe SHI
Address: SoftwareONE AG | Birao foibe
Global COMPAREX AG Adiresy: Leipzig, Alemana
Global CACI International Inc Adiresy: Arlington County, Virginia, Etazonia
Adiresy: foibe maneran-tany Insight
Global Synnex Corporation Telefaona lehibe: + 1-510-656-3333
Fax lehibe: + 1-510-668-3777
Varotra: + 1-800-756-9888
Adiresy: foiben'ny orinasa
Adiresy: No.14, Balaji Chambers
2ndFloor, làlambe faha-10
India AB&D Software India Pvt. Ltd. Laharana: + 91-080-4111 5871
Adiresy: AB&D Software India Pvt Ltd.
Broney Cogito Solutions Ltd. Telefaona: + 852-23976665
Adiresy: Unit B, 13 / F., Winsan Tower,
Shina COGITO SOFTWARE CO.,LTD. Phone: +86-10-68421378, +86-10-68421379
Adiresy: Room 1105, C2, Hao Bai Da Sha,
No.50 Xisanhuan North Road, Distrikan'i Haidian,
Beijing Sina 100048
Uzbekistan Softline Group Telefaona / Fax: +7 (495) 232-00-23
Moskoa, Russia 115114
Ny firenena Commonwealth of Independent States (CIS) & ny firenena Baltika Pba Consult LLC Pba Consult LLC
Moskoa, 129366, Russia
Telefaona: +7 495 797-89-97
Rosia Syssoft, LLC Telefaona: +7 (495) 646-14-71 ext.113
Moskoa 125373, Russia
Rosia Softmap, LLC Softmap, LLC
Telefaona: +7 (495) 627-69-00
lasa DataNumen mpivarotra:
DataNumen manolotra ny fahafahan'ny mpivarotra am-bola hiteraka fidiram-bola fanampiny amin'ny fidirana amin'ny DataNumen Programme mpiara-miasa amin'ny mpivarotra. Ny fizotran'ny fisoratana anarana tsotsotra dia hahafahanao ho tonga anisan'ny lehibe indrindra sy most fandaharana mpivarotra vokatra fanarenana angona mahomby.
Miarahaba antsika rehetra izahay, ao anatin'izany ireo mpivarotra lafo vidy, mpanatevin-daharana sy mpanolotsaina mivarotra serivisy sy / na rindrambaiko na fitaovana mameno amin'ny mpampiasa farany mivantana, na orinasa manao varotra sy fampiroboroboana vokatra amin'ny alàlan'ny fivarotana antsinjarany, fivarotana lozisialy, fivarotana solosaina, departemanta magazay, fivarotana lehibe, sns.
DataNumen ny programa mpivarotra entana no tsara indrindra. Nahoana?
Fihenam-bidy hatramin'ny 65%, nampitomboin'ny fahombiazanao.
Ho an'ny mpivarotra vaovao dia manolotra izahay 10% fihenam-bidy avy hatrany. Ary raha vao mivarotra lisansa mihoatra ny 5 amin'ny vokatra rehetra ianao isam-bolana dia hahazo farafaharatsiny 20% fihenam-bidy ho an'ny fividianana rehetra amin'ny volana manaraka. Ary afaka mahazo fihenam-bidy bebe kokoa ianao amin'ny fivarotana bebe kokoa, toy izao manaraka izao:
Raha namidy mihoatra ny 5 fahazoan-dàlana amin'ny volana iray dia hatolotray anao 20% fihenam-bidy amin'ny volana manaraka!
Raha mihoatra ny 10 fahazoan-dàlana, ny fihenam-bidy 25%!
Raha mihoatra ny 20 fahazoan-dàlana, ny fihenam-bidy 28%!
Raha mihoatra ny 50 fahazoan-dàlana, ny fihenam-bidy 35%!
Raha mihoatra ny 100 fahazoan-dàlana, ny fihenam-bidy 50%!
Raha mihoatra ny 200 fahazoan-dàlana, ny fihenam-bidy 65%!
Amidio bebe kokoa ary ahazoana bebe kokoa! Start Amin'izao fotoana izao!
Fanamarihana: Raha milatsaka ny varotrao dia hihena koa ny fihenam-bidy.
DataNumen malaza be ny vokatra.
Izany no antony anomezanay antoka anao ho an'ny avo lenta. Amin'ny maha-mpitarika an'izao tontolo izao momba ny teknolojia fanarenana angon-drakitra, dia namidinay ny rindrambaiko fanarenana angon-drakitra nahazo loka tamin'ny firenena 130 mahery. Ny mpanjifanay dia manomboka amin'ny solosaina vaovao hatramin'ny consultant IT matihanina sy mpanome serivisy fanarenana data, manomboka amin'ny fikambanana madinidinika ka hatramin'ny orinasa lehibe ao anatin'izany ny harena 500. Raha ny tena izy, ny mpampiasa solosaina tsirairay dia mety manana takiana mety amin'ny vokatra fanarenana data.
Fanohanana feno fampahalalana.
Amin'ny maha-mpiara-miasa antsika dia mahazo fampahalalana tena lehibe sy manampy ianao:
fividianana sy tahan'ny fampidinana (taham-panovana) ho an'ny vokatra rehetra,
ny hetsika sy fihenam-bidy amin'ny ho avy,
ny vokatra tsara indrindra aminay.
Mba hanatanterahana izany dia manatanteraka vaovao manokana postmiketrika ho an'ny mpiara-miasa ary manohana ny fizarana misy akony mihidy miaraka amin'ny fampahalalana marobe momba ny vokatra. Hanampy anao hisafidy ireo vokatra tsara indrindra amidy amin'ny tranokalanao izany, hanatsara ny varotrao ary hampitaha ny fahombiazan'ny varotra.
Fonosana feno fitaovana fampiroboroboana.
Ny fitaovana fampiroboroboana rehetra ho an'ny vokatra rehetra (toy ny famaritana, ny dokam-barotra ary ny serasera, ny sora-baventy, ny mari-pahaizana, ny hevitra, ny hevitry ny mpanjifa tsara indrindra, ny tafa sy dinika amin'ny mpamorona ary maro hafa) dia azon'ny mpiara-miombon'antoka ampiasaina foana. Tsy handany fotoana be ianao rehefa mitady sora-baventy na sary ilainao eo amin'ilay tranonkala.
Fanentanana amin'ny doka sy hetsika marketing.
Afaka manao fampielezan-kevitra amin'ny fiaraha-miasa miaraka aminao izahay. Misy ny vidiny manokana ho an'ireo mpivarotra, ary koa fihenam-bidy betsaka, fivarotana fialantsasatra, mailaka mivantana ary maro hafa. Azonao atao foana ny mangataka fangatahana fitaovana dokam-barotra na inona na inona karazany. Azonao atao ihany koa ny miantehitra amin'ny fiakaran'ny isan-jaton'ny komisiona rehefa mandamina vaovao postfanentanana, fampielezan-kevitra amin'ny doka, ary hetsika marketing. Indraindray aza dia omentsika vola ampahany amin'izany hetsika izany. Manana hevitra ve ianao? Mifandraisa aminay!
Ny fanampiana haingana dia misy foana.
Izay fanontaniana, tolo-kevitra ary fangatahana dia hojerena ary hahazo valiny tsara ianao amin'ny fotoana fohy indrindra. Azafady, ampiasao ny anay fangatahana valiny hametraka fanontaniana na hanao fangatahana momba ny programa reseller.
Ahoana ny start
Ny programa mpivarotra anay dia tantanan'i MyCommerce.com, ny mpitarika an'izao tontolo izao amin'ny programa famarotana reseller rindrambaiko. Mora dia mora ny programa. Tsy misy miafina costs ary izany dia maimaim-poana to sign up.
Tsindrio Eto raha hisoratra anarana ny programa reseller ankehitriny
Aorian'ny fisoratana anarana dia handefa anao mailaka fanamafisana misy ny ID mpivarotra anao izahay. Ny kaonty mpivarotrao dia nankatoavina avy hatrany ary azonao ampiasaina hividianana ny vokatray dieny izao, toy izao manaraka izao:
Visit tranokalanay ary kitiho ny rohy fandefasana MyCommerce ho an'ny vokatra mifanentana tianao hovidiana.
Ao amin'ny endrika kaomandy MyCommerce, ao amin'ny "Mpanjifa / mpivarotra miverina" Ampidiro ny ID ny mpivarotra anao sy ny teny miafinao hidirana. Avy eo ianao dia afaka mividy ny vokatra. Ny ID mpivarotra dia hita ao amin'ny mailaka fanamafisana fisoratana anarana alefanay aminao, ary ny teny miafina no ampidirinao rehefa misoratra anarana ianao.
Amin'ny voalohany dia manolotra fihenam-bidy 10% izahay, ary raha vantany vao mivarotra lisansa mihoatra ny 5 amin'ny vokatra rehetra ianao isam-bolana dia hahazo ianao fihenam-bidy bebe kokoa ho an'ny fividianana rehetra amin'ny volana manaraka.